Maqal iyo muuqaalo cusub oo ku saabsan dilka Jamal khashoggi oo Turkigu soo bandhigay iyo macluumaadka Apple iWatch-ka Jamaal – Radio Daljir
Maqal iyo muuqaalo cusub oo ku saabsan dilka Jamal khashoggi oo Turkigu soo bandhigay iyo macluumaadka Apple iWatch-ka Jamaal
Aktoober 14, 2018 2:45 b 0
Waxaa isa soo taraya wararka ku saabsan in Jamaal Khashoggi si xun loogu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul, laguna dilay amar dusha sare ka yimid iyo sida la malaynayo Amiir Maxamed bin Salmaan.
Dowladda Turki ayaa tartiib-tartiib maalinba maalinka xiga firdhinaysa warar ku saabsan sida Jamaal Khashoggi loogu dhex dilay qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbuul.
Wararkii ugu danbeeyey ee warbaahinta ka agdhow dowladda Turkiga ayaa sheegaya in Jamaal uu asagu qof ahaan duubay habka loo dilay asaga oo is dadban u isticmaalay saacaddiisa iWatch oo ku xiran taleefoonka iPhone oo uu xaaskiisa oo bannaanka qunsuliyadda ku sugeysay uu ugu soo tagay iyo waliba akoonkiisa iCloud oo codadka sii keydisay.
Waxaa kale oo jira warar kale oo sii xoogeysanaya sheegayana in Turkigu ay basaasayeen qunsuliyadda Sucuudiga, ayna hayaan maqal iyo muuqaalo kale oo ku saabsan dilka Jamaal. Laakiin arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo isbiirsaday dartood ay illaa iyo hadda ku adagtahay Turkiga in ay soo bandhigaan caddaymahaas iyo waliba habka ay ku heleen.
Hoos ka dhegayso warbixinta Radio Daljir oo faahfaahsan.
Hoos ka daawo muuqaal ahaan warbixinta Radio Daljir oo faahfaahsan.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 428 Wararka 14830
Maxkamadda Ciidamada oo xukun ku fulisay nin ku eedaysnaa qaraxii Soobe, sanad kadib
Hiigsi & Hayaan: Taxanaha 48aad iyo Cabdifataax Cumar Geeddi (dhegayso)